Shuangye ebike ohuru ngwaahịa malitere | ebike Shuangye
Mbido Shuangye igwe eletriki igwe eletriki ohuru malitere
Shuangye ebike emeputara ohuru
2020 bu afo puru iche. N'ime afọ a, Shuangye igwe eletrik na-esonye na ihe ize ndụ na ohere, na n'oge a, anyị na-arụsi ọrụ ike na-emelite ma na-arụ ọrụ igwe eletrik anyị iji nye ndị ahịa nhọrọ ndị ọzọ. Enwere ụdị dị iche iche emere ọhụụ, enwerekwa nke nwere ike ijide ihu ọma gị.
1. 26, SHUANGYE mgbanwe igwe eletriki igwe eletrik (500W)
Iji mekwuowanye ahụmịhe ndị na-agba ịnyịnya nke ndị ọrụ, anyị na-emeziwanye aka nke igwe eletriki igwe eletrik, ma kwalite ihe mgbochi mbụ na-enweghị ike idozi ya. Nkwalite a bụ maka ndị ọrụ nwere ogo dị iche iche. Enwere ike ikwu na ọ dị ezigbo mma. Nwere ike ịhazigharị ma ọ bụ wedata ogo nke aka ahụ dị ka ogo gị si dị iji nweta ọnọdụ ịnya ụgbọ kacha mma ma melite ahụmịhe ịnya gị. Dika ejiri ihe eji edozi ya, ihe abuo a gha enyere ibe gi aka ma gha enye gi ezigbo onu ogugu.
Moto: 48V 500W gearless moto-moto
Ike ọsọ: 35-40 km / h
Batrị: Batrị lithium 48V 10AH nwere igodo
Ebe: 1: 1 PAS mode, 40-80KM
Chaja: 54.6V 2A 100-240V ntinye CE / UL Asambodo
Njikwa: 48V ọgụgụ isi brushless
2. newgba ọkụ eletrik eletrik ọhụụ na-eme ka mmiri dị ọhụrụ 700 * 35C (250W)
Are ka na-echegbu onwe gị banyere taya nke ọgba tum tum? Mgbe ahụ ịkwesịrị ịma banyere igwe eletriki igwe eletriki igwe ọhụụ na-eme ngwa ngwa. Ebe mbụ na-egbuke egbuke bụ na anyị na-eji taya 700 * 35C buru ibu, nke nwere ike ịnakwere ibu ọzọ, na-ebelata ihe omume nke taya taya, ma na-agbatịkwu ntụkwasị obi; nke abụọ kwesịrị ịja mma bụ ahụ anyị zuru oke na mmiri wepụtara ngwa ngwa gosipụtara arụmọrụ ka mma na mmezi na njikwa kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ahịrị mebiri n'ihi ihe ụfọdụ, naanị ị ga-eji nwayọ nwayọ wepụ isi abụọ nke interface ahụ ma dochie ya na nke ọhụrụ iji weghachite ọdịdị mbụ. Ọ bụghị ya super mfe? Nke atọ bụ ịgbatị etiti, nke dabara adaba maka ndị mmadụ na Europe na America.
Moto: 36V 250W gearless moto-moto
Nje ọsọ ọsọ: 25 km / h
Batrị: Batrị lithium 36V 8AH
USB: Ntọhapụ ngwa ngwa & mmiri
Etiti: 6061 alloy alloy
3. Ultralight carbon fiber electric ịnyịnya ígwè 36V ketulu batrị (350W)
“Egwu! Ahụtụbeghị m igwe eletrik eletrik dị etu a dị mfe ”ka otu onye mere ọhụụ kịịịlị eletriki igwe eletrik kachasị ọhụrụ kwuru. Iji mee ka ụdị ịnyịnya ígwè eletrik dịkwuo mma, nye ndị ọrụ nhọrọ ndị ọzọ, ma bulie ihe anụ ahụ, anyị ahọrọ eriri carbon a họọrọ, nke dị mfe ma dịkwuo mfe karịa ihe ndị ọzọ, dị ka ígwè. Ike, ndụ ọrụ ga-amụba ya. Ọ bụ ihe kwesịrị ịja mma na ngwungwu wiwi magnesium ya na azụ ya nwere ike karịa rim ndị ọzọ, na mmezi ụgwọ ga-ebelata.
Moto: 36V 350W gearless moto-moto
Ọsọ ọsọ ọsọ: 25-32 km / h
Batrị: Batrị lithium 36V 10AH nwere igodo
Etiti: Carbon eriri
Wheel: Magnesium alloy 6 kwuru okwu
4. 29, suspension zuru ezu nkwusioru igwe eletriki igwe eletrik (350W)
Dị ka igwe eletriki igwe eletrik, kedụ ọrụ ị chọrọ ịrụ karịa? Mgbe anyị nyochachara ọtụtụ oge, anyị chọpụtara na ndị ọrụ 80% nwere olile anya na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịnwe usoro nchekwa nchekwa nke ọma, n'ihi na ọnọdụ okporo ụzọ maka igwe kwụ otu ebe bụ ugwu ma ọ bụ olulu. N'okwu a, sistemụ egwu na nchekwa na arụmọrụ dị elu na-adị mkpa karịsịa. Ihe mkpuchi ihu ube ahụ na ihe na-adọrọ adọrọ n'okpuru sadulu na-agbakwunye ibe ha, nke nwere ike belata nrịpu nke ọnọdụ okporo ụzọ kpatara.
Motor: 36V350W gearless brushless ehiwe-moto
Ike ọsọ: 25-35 km / h
Nso: 1: 1 Pas ọnọdụ, 40-80KM
Front ndụdụ: suspenison n'ihu ndụdụ
Suspension: azụ nkwusioru
5. Ultra-ike sọrọ-moto abụba taya eletrik moped (750W)
Chọrọ ịchụso igwe eletrik dị ike ma dị ike karị? Shuangye kwalite igwe n'ihu igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki, igwe ihu ihu bu 60V 750W, igwe azu bu 60V 750W, na ihu ihu na azụ na-agakọ ọnụ, nke ga-enye gị ahụmịhe kachasị na-agba ịnyịnya. Ngwunye abụba 20 fat * 4.0 nwere ike iburu 150-200KG dị arọ; nnukwu taya na-eme ka mpaghara ịkpọtụrụ ahụ dịkwuo ala, na ụdị taya pụrụ iche ga-eme ka ịnya ịnyịnya ahụ kwụsie ike ma nwee ike ịmegharị n'ụzọ dị iche na mbara ala dị iche iche.
Motor: 60V 750W moto abụọ
Oke ọsọ: 40-45km / h
Batrị: Batrị lithium 60V 18AH nwere igodo
Ebe: 1: 1 PAS mode, 80-100KM
Chaja: 71.4V 3A 100-240V ntinye CE / UL Asambodo
Njikwa: 60V ọgụgụ isi brushless
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụtakwu gbasara igwe eletrik, ma ọ bụ chọọ ịzụta ụdị igwe eletriki ndị ọzọ, ịnwere ike ịhapụ mkpa gị na ozi ịkpọtụrụ n'okpuru, anyị ga-azaghachi gị ozugbo enwere ike. Ma ọ bụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị: www.zhsydz.com